किन हाने प्रहरी जवानले आफैंलाई गोली ? - Everest Dainik - News from Nepal
किन हाने प्रहरी जवानले आफैंलाई गोली ?
असोज ७ । स्याङजामा ड्युटीमा रहेका प्रहरी जवानले आफ्नै राईफलले आफ्नो च्यापुमा गोली हानी आत्महत्या गरेका छन् । उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ ।
प्रहरीका अनुसार कारागार स्याङ्जामा कार्यरत नवलपरासी विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका–६ घर भएका प्रहरी जवान जितेन्द्र थापा मगरले आफैैले आफैलाई गोली हानेका हुन्।
याे पनि पढ्नुस प्रेमी प्रेमिकाले गरे एउटै डोरीमा झुण्डिएर आत्महत्या
कारागार प्रमुख बुद्धिप्रसाद शर्माले एकजना प्रहरी जवानले ड्युटीमै आफैंले आफैलाई गोली हानेको पुष्टि गरे । उनले मृतकका विषयमा थप बुझ्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रहरीका अुनसार कारागारको मूल गेटमा ड्युटीमा खटिएका उनले आफूसँग रहेको मार्का ४ राईफलबाट १ राउण्ड गोली आफ्नै च्यापुमा हानेका हुन् ।
याे पनि पढ्नुस भारतमा फेरी पिएचडीका अर्का दलित छात्रद्वारा आत्महत्या
गम्भीर घाइते अवस्थामा जिल्ला अस्पताल लगिएकोमा बिहान करिब ५ बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाले जनाएको छ।
उनी शनिबार राति २ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्मका लागि कारागारको मूल गेट सुरक्षामा खटिएका थिए।